कांग्रेसका लागि हिन्दू राष्ट्रको बहस कति हितकर ? «
कांग्रेसका लागि हिन्दू राष्ट्रको बहस कति हितकर ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले हिन्दू धर्म विरोधीहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गराएको कांग्रेसको नीतिगत छलफल हुने महत्वपूर्ण निकाय महासमिति बैठकमा ८ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने अडानमा छन् । अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई ‘सफ्ट कर्नर’बाट हेर्छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा आधा बढी महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर महामन्त्रीद्वयको अडान र कार्यकर्ता तहमा समेत देखिएको हिन्दू धर्मप्रतिको मोहले कांग्रेसमा हिन्दू धर्मका पक्षमा बलियो जनमत रहेको प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहस जारी रहँदा अन्य दलमा रहेका हिन्दूवादीहरूले समेत निक्कै चासोका साथ हेरेका थिए ।
पुसको चिसोमा कांग्रेसभित्रको हिन्दू धर्मको बहसले माहोल ततायो । कांग्रेसको महासमिति बैठक नसकिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसभित्र भइरहेको हिन्दू राष्ट्रको बहसबारे चासो व्यक्त गर्दै टिप्पणी नै गरे । धर्मनिरपेक्षता घोषणा गराउँदा शंकास्पद भूमिका खेलेका कांग्रेसभित्रैका नेताहरू पनि केही तिरमिराएको महासमिति बैठकमा देखियो । उनीहरू सकभर बैठकमा कसैले हिन्दू राष्ट्र नभनिदेओस् भन्ने चाहन्थे ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत कांग्रेसमा उठेको हिन्दू राष्ट्रको बहस सरकारका पछिल्लो गतिविधिले सनातनदेखि चलिआएको धर्ममाथिको असुरक्षाको जागरण भएको बताउँछन् । सरकार आफैं अमूक धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा आयोजक बन्दा संविधान र संस्कृतिमाथि प्रहार भएकाले त्यसले उत्पन्न गरेको असुरक्षाको भावना बैठकमा व्यक्त भएको उनको भनाइ छ । “एसिया प्यासिफिक समिटका नाममा क्रिश्चियन धर्मभित्रै अस्विकार्य रहेको स्वघोषित जिससकी छोरीको कार्यक्रममा सरकार आफैं सहआयोजकका रुपमा लाग्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं होटलमा बस्दै हिँड्नुभयो,” सहमहामन्त्री महतले भने, “संविधानमा धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुने, सनतातन धर्मको रक्षा गर्ने भनिएको छ । तर, होली वाइन पिउँदै धर्मप्रचारकको कार्यक्रममा सरकार नै गएपछि धर्मका विषयमा जागरण आएको छ । सरकारलाई सचेतना र खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र बहस भएको हो ।”
जुनसुकै धर्मले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने स्वतन्ता हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसमा कुनै दुविधा नभएको उनले बताए । सरकारले संविधान र संस्कृतिविरोधी काम गरेकाले कांग्रेसमा उठेको हिन्दू राष्ट्रको बहसलाई नेकपाका अध्यक्ष दाहालले अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट व्यक्त गरेको महत बताउँछन् । दाहालले कांग्रेसमा भएको हिन्दू राष्ट्रको बहसलाई लिएर गरेको टिप्पणीबारे महत भन्छन्, “धर्मसंस्कृतिमाथि उहाँहरूको विश्वास छैन । त्यसैले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिप्रति कांग्रेसमा देखिएको जागरणप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण क्षणिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसको कुनै तुक छैन ।”
कांग्रेसमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ कि ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्नेमा पनि बहस छ । तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधि धार्मिक स्वतन्त्रताकै उन्नत रुप धर्म निरपेक्षता भएको बताउँछन् । “धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दू धर्मको विरूद्ध होइन । अथवा कुनै पनि धर्मलाई मान्दै नमान्ने भन्ने पनि होइन । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्म परिवर्तन पनि होइन । धर्म परिवर्तनलाई समाजले, कानुनले, संविधानले दण्डनीय मानेको छ,” निधिले भनेका छन् ।
कांग्रेसमा ठूलो संख्या पछिल्लो समय बढिरहेको धर्म परिवर्तनप्रति रुष्ट देखिन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हिन्दू राष्ट्रमा फर्कनुपर्ने धारणा राख्छन् कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी । देशमा बढिरहेको कम्युनिष्ट जनमतलाई रोक्न र कांग्रेस जोगाउन पनि कांग्रेस हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जानुपर्ने भण्डारीसहितका हिन्दू राष्ट्र पक्षधर नेताहरूको जोड छ । देशमा बहुसंख्यक हिन्दू रहेको, क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको र धर्म परिवर्तनका नाममा हिन्दू धर्म मास्ने खेल भइरहेकाले कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट फर्कनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
तर, भण्डारीसहित हिन्दू राष्ट्रमा कांग्रेस फर्कनुपर्छ भन्नेहरूको भन्दा विपरित मत राख्छन्, नेता कृष्ण सिटौला । उनको मत छ, “हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत राख्दा ठूलो हुने भए कमल थापाको राप्रपा ठूलो पार्टी हुन्थ्यो ।” यस्तो मत राख्ने सिटौला प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आएको राप्रपाकै राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षतालाई उनी उपलब्धी मान्छन् र त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
विश्लेषक अरुण सुवेदी नेपाली कांग्रेसमा भएको हिन्दू राष्ट्रको बहस कांग्रेसको इतिहासमै आफ्नै सैद्धान्तिक भावभूमिलाई लिएर भएको पहिलो गम्भिर बहस भएको बताउँछन् । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद भन्दा पहिला नेतृत्व र कार्यशैलीका विषयमा बहस हुने गरेपनि सैद्धान्तिक भावभूमिमा भने बहस नहुने गरेको उनी बताउँछन् । “कांग्रेसमा विगतमा पार्टीको सैद्धान्तिक भावभूमिलाई लिएर विवाद थिएन । जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसले स्विका¥यो, त्यसले कांग्रेसलाई जटिलतामा पु¥यायो,” विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “ इतिहासमै पहिलोपटक महासमिति बैठकमा कांग्रेसमा आफ्नो पूर्ववत् सैद्धान्तिक भावभूमिमा फर्कनुपर्छ भनेर गम्भिर गम्भिर बहस भएको छ । सांस्कृतिक राष्ट्रिताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा गयो भने कांग्रेसको भविष्य उज्वल छ ।”
कांग्रेसमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा ३ वटा धार रहेको सुवेदी बताउँछन् । अग्रगमनको नाममा अहिलेको संविधानले विशेषता बनाएको धर्म निरपेक्षताको पक्षमा रामचन्द्र पौडेल, निधि, सिटौला, गगन थापालगायत रहेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, कांग्रेसको सांस्कृतिक राष्ट्रका पक्षमा महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेताहरू रहेको र सभापति शेरबहादुर देउवा भने यस विषयमा मौन देखिएको उनले बताए । महासमिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रस्तावले कांग्रेस र कम्युनिष्टका बीचमा कुनै फरक नदेखिएकाले कांग्रेस पूर्ववत् सैद्धान्तिक धरातलमा नफर्कने हो भने समाप्त हुने पनि सुवेदी जिकिर गर्छन् ।
कांग्रेस महासमितिमा हस्ताक्षर दर्ज भएको हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको आवाजलाई आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानकै भावनाअनुसार पारित गराएर कांग्रेसले तत्कालका लागि थामथुम पारेको छ । तर, भविष्यमा कांग्रेसभित्र रहेको बलियो हिन्दू राष्ट्रको मत कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने चासोको विषय छ ।